Abuuri mareegaha CivilCAD - Geofumadas
Nofeembar, 2011 AutoCAD-AutoDesk, topografia
Mi maqaal hore Waxay sharraxday wax ku saabsan CivilCAD, codsi aad u macquul ah oo loogu talagalay labada AutoCAD iyo Bricscad. Hadda waxaan rabaa inaan jimicsiga sii wado mar kasta oo aan horey u soo qaadano Koorsada sahanka oo leh Wadarta Gawaarida, oo ka shaqeynaya isku-xirnaanshaha qaab-casri ah.
Xaaladda CivilCAD tan waxaa loo yaqaan 'axis mashruuc', inkastoo laga soo bilaabo SoftDesk ama Land waxaanu u aqoonsannay sida ay ula jaan qaadaan magaceeda Ingiriisi. Asal ahaan waxay ka kooban tahay abuurista xuddun dhexe, kaas oo noqon kara lineka tuubada, fiilada naqshadeynta waddo ama si siman xariiq qaybta iskutallaabta.
Ka dib maqaalkii dhawaa, halkaas oo aan ku muujiyey sida loo abuurayo qaab digital ah leh khadadka mawjadaha, waxaan si kooban u soo koobayaa sida loola shaqeeyo nashkhaddaada iyo abuurista.
1. Abuuritaanka Xayeysiis 3D
Tani, maadaama ay lagama maarmaan tahay in la abuuro buugga dusha sare, waxaa lagu talinayaa inay ku sameeyaan 2D, oo tilmaamaya dhibcaha meesha ay ka gudubtahay, sababta oo ah waxay caadi ahaan la socotaa qaab-dhismeed dabacsan. Kadib marka loo eego garaan-baaleed, gundhigyada ayaa la taabtay, heerkana waxaa lagu bedelay miiska guryaha. (Amar amar + geli)
Kadibna, khadadka ayaa ku soo biiraya, oo leh amarka feerka, ikhtiyaarka biiro.
Haddii aad leedahay xuduudaha x, y, x markaa waa sahlan tahay. Qodobbo la abuuray, oo leh amarka dhibic, ka dibna qor xaashadaha x, y, z iyo ka-soo-celinta Excel. Ka dibna cirbadda ayaa la qaadaa SNAP firfircooni barta noodhka (dhibic).
2. Qeexaan saldhigyada dhirta
Tani waxaa laga sameeyaa menu CivilCAD> Altimetry> Axis Mashruuca> Saldhigyada Calaamadaha
Waxaan ku soo celineynaa taxane qadka taliska ah oo kaliya inaad raacdo:
1 Daabacaadda Sawirka ee <1000>:
Tani waa inay ku sameeyaan cabbirka aan rajeyneyno inaan daabacno qorshayaasha ama soo saarno Layouts. Waxaanu xusuusneynaa danahayaga, kiiskan 1000, ka dibna geli.
Xulo farsamooyinka mashruuca:
Halkan ayuu nooga codsanayaa in aan doorto polyvin. Waa inaad taabataa meel u dhow meesha aan rabno xilliyada ay bilaabayaan.
Magaca xarumaha rasmiga ah ee <0 + 000>:
Tani waa, haddii aan rabno qaab kale oo loogu talagalay nooca saldhig kasta, haddii aanan baddelin waxaan kaliya samaynaa geli.
Dhererka saxda ah <10.000>:
Dhererka bidix <10.000>:
Halkan, wuxuu nooga codsanayaa inta aan rabno in nidaamka uu tixgeliyo, abuuritaanka qaybo kala duwan. Sida caadiga ah waa dhinac isku mid ah, laakiin maahan khasab, sida kiiska waxaannu ka shaqeyneyno xawaaraha 2, 2 haadka soo galaya; Waa wax iska cad in aan u baahannahay in hal dhinac aanu qaadno masaafad ka weyn si uu u dhaafo haadka kale oo ka mid ah jiirada.
Wareegga/ Qeybta / Saldhig / Barta / Dhamaadka <I>:
Halkan waxa uu nooga weydiinayaa sida aan u rajeyneyno xarumaha idaacadaha in loo calaamadeeyo fiilada; Xaaladeena, waxaan rabnaa mitir kasta 20, waxaanu dooranaynaa warqadda.
Kala qaybinta idaacadaha20.000>:
Tan iyo markii aan dooranay doorashada dhexdhexaadinta, waxaanu hadda dhignaa masaafada. Kadibna waxaan doorannaa saldhigga koowaad iyo kan ugu dambeeya.
Xarunta hore0 + 000>:
Saldhigga ugu dambeeyay <X + XXX>:
Laga soo bilaabo waqtigan, sheybaarkaas waxaa loo tixgeliyaa inuu isku xiro, marka la eego dacwada CivilCAD, Axis, macluumaad la xiriira. Qaar ka mid ah macaamiishu waa mid sabool ah, laakiin waa mid fudud sababtoo ah habka tooska loo qeexay; cadee in CivilCAD wax badan ma qabato, laakiin jaahwareerka u dhexeeya Nidaamka iyo Qorshayaasha Survey waxay doonayaan dulqaad qaar; kadibna tirada tabs ee guddiga mawduuca ugu dambeyntii iyo ugu dambeyntii ay ku adagtahay in loo gudbiyo template shaqo kale.
3. Abuuri sawirka
Hadda waxa aan daneyneyno waa in la qeexo khariidadda dhererka ee dhulalka ku yaalla qashinka.
Tani waxaa la sameeyaa menu, CivilCAD> Altimetry> Profiles> Terrain> Draw
Ka dibna waxaan raacnaa taxanaha qadka taliska:
Axis/ Qodobbooyinka / Buuga / Dukuminti / 3d polyline <E>:
Xaaladdan, waxaan isticmaali doonnaa xulashada Axis (Letter E), hase yeeshee waxaa laga yaabaa in uu ahaa 3D polyline haddii aanaan u rogin si toos ah, dhibcaha ama xitaa khadka tooska ah ee gacanta.
1 miisaanka qiyaaseed ee <1000.000>:
Qiyaasta xaddiga 1 si <1000.000>:
Waa sahlan tahay in la bedelo qiyaasta xajmiga, haddii aan rabno isbeddelka sare u qaadidda in la dareemo. Tusaale ahaan, haddii aad dooratey miisaanka xNUMX, waxaad isticmaali kartaa miisaanka 1,000. Tani waxay sameyn doontaa xiriirka 200: xiriirka 1 ee samayn kara aragti macno leh.
Waxay na weydiisaneysaa meesha aan ku qori karno profile, waxaan dooraneynaa dhibicda midig ee sawirka, ka dibna geli.
4. Abuuraan bogga sawirka
Waxaan ka dooranay menu CivilCAD> Altimetry> Aqoonsi> Dib-u-gurasho ka dibna waxaan raacnaa taxanaha qadka taliska:
Xulo astaanta deegaanka:
Waxaan ku muujineynaa guddiga in lagu soo bandhigay, haddii aan dooneyno oo keliya meelaha dabiiciga ah, ama sidoo kale isku xirnaanshaha. Waxaan sidoo kale qeexaynaa haddii calaamadaha waxay noqon doonaan kuwo si toos ah ama waxaan u qeexi doonaa gacanta.
Magaca ayaa la calaameeyay oo xogta idaacadaha waxaa lagu qeexay masaafo ah xuduud, halkaasoo uu bilaabo, tirada jajab tobanlaha iyo haddii aan dooneyno sanduuq hareeraysan.
Taas awgeed, shaqadayadu waa inay diyaar noqotaa. Dhab ahaan, fudud marka la barbardhigo 3D Civil, inkasta oo waxoogaa xaddidan qeexitaanka sheybaarada in uu ku jiro foomka XML. Waxaa sidoo kale jira qaar ka mid ah dhibaatada cusbooneysiinta si toos ah u dhexaysa dhirta iyo profile.
Post Previous«Previous Mowduucyada Congresska ee baadhitaanka Guatemala
Post Next Latinobarómetro, soo sheeg 2011Next »